Linux Mint ichavhara yakavanzika snapd kuisirwa | Kubva kuLinux
Linux Mint ichavhara yakavanzika snapd kuisirwa
Vagadziri ve kuzivikanwa kwakapararira "Linux Mint" kuziviswa munguva pfupi yapfuura chii chichave chinowanikwa mune yako inotevera kuburitsa yeLinux Mint 20 uye vataura kuti iyo nyowani vhezheni yekuparadzira haizotumire nerunyararo rutsigiro rweiyo snap uye snapd mapakeji.
kunze kwaizvozvo otomatiki kuisirwa snapd pamwe nemamwe mapakeji akaiswa kuburikidza neAPT zvicharambidzwa. Izvi hazvireve kuti mukugovera pane chakakiyiwa chega chega, asi kunyanya kana uchida, mushandisi anogona kuisa Snapd nemaoko, asi izvo zvichave zvichirambidzwa nekuparadzirwa kugona kuzviwedzera nemamwe mapakeji pasina ruzivo rwemushandisi.
Iko kukosha kwedambudziko nderekuti iyo Chromium browser inogoverwa paUbuntu 20.04 chete muSnap fomati uye pane chunk mune iyo DEB repository, iyo kana iwe ukaedza kuiisa pasina kuisa Snapd pane ino sisitimu, inobatana kune iyo Chitoro cheSitolo uye iyo Chromium package inotorwa mumafomati esnap uye script inotangwa kutamisa iyo yazvino kumisikidzwa kubva kuUS $ HOME / .config / chromium dhairekitori.
Iyi Deb package muLinux Mint ichatsiviwa neisina chinhu pasuru isingaite chero matanho ekumisikidza, asi inoratidza rubatsiro pane iko mushandisi kwaanowana iyo Chromium package.
Iyi yese kufamba kunobva ku Canonical ini ndakaita sarudzo yekuchinjira kuChromium chete mune snap fomati ndokumira kuburitsa madhiri mapakeji nekuda kwekuoma kwekuchengetedza Chromium kune ese akatsigirwa Ubuntu matavi.
Browser inogadziridza inoonekwa kazhinji zvakakwana uye nyowani deb mapakeji aifanirwa kunyatso kuyedzwa nguva yega yega yekudzokorora kweiyo yega Ubuntu vhezheni.
Tichifunga izvi, kushandiswa kwesvutugadzike kwakarerutsa maitiro aya uye kwakaita kuti zvikwanise kudzora kugadzirira uye kuyedzwa kweyakajairika snap package kune ese akasiyana Ubuntu. Pamusoro pezvo, kuendesa kubhurawuza nekukasira kunokutendera kuti uivhure munzvimbo yakasarudzika yakagadzirwa uchishandisa iyo AppArmor michina uye chengetedza iyo yese sisitimu yako kubva pakushandisa kusagadzikana kuri mubrowser.
Kusagutsikana kwevagadziri veLinux Mint kunokonzerwa nekumisikidzwa kweiyo Snap Chitoro sevhisi uye kurasikirwa kwekudzora pamusoro pemapakeji kana akaiswa kubva kuSnap.
Vagadziri havagone kugadzirisa pamapakeji akadaro, maneja kuendesa kwavo, uye kuongorora shanduko.
Zvese zviitiko zvine chekuita neSnap mapakeji zvinoitika kuseri kwemasuo akavharwa uye hazvidzorwe nharaunda. Iko kugona kuchinjira kune kumwe kunongedza kwekunongedzera hakuna kupihwa.
Snapd inomhanya pamudzi system uye inomiririra njodzi huru kana zvivakwa zvikakanganiswa.
[…] Paunenge iwe uchiisa APT inogadziridza, Snap inova chinhu chinodiwa kuti iwe urambe uchishandisa Chromium uye kuisa kumashure kwako. Izvi zvinoputsa chimwe chezvinonetsa vanhu vazhinji vaive nazvo apo Snap yakaziviswa uye vimbiso kubva kune vanogadzira kuti yaisazombotsiva APT.
Yega-yekuisa Snap Chitoro iyo inonyora chikamu chedu APT pasuru base yakazara yakazara NO. Icho chinhu chatinoda kumisa uye zvinogona kureva kupera kweChromium inogadziridza uye kuwana kune iyo snapshot chitoro paLinux Mint.
MuLinux Mint 20, Chromium haizove isina chinhu pasuru inotora mumashure mako. Ichave iri isina kurongedza inokuudza kuti nei isina chinhu uye ichikuudza kwaunofanira kutarisa kuti utore Chromium iwe pachako.
MuLinux Mint 20, APT icharambidza kuiswa kwe snapd.
Linux Mint vanogadzira vanotenda kuti modhi yakadai haina kunyanya kusiyana neayo proprietary software kuendesa uye vanotya kuita isingadzorwe shanduko. Kuisa snapd isina ruzivo rwevashandisi paunenge uchiedza kuisa mapakeji kuburikidza neAPT package maneja inofananidzwa nekombuta yekunze yekubatanidza komputa kuUbuntu Chitoro.
Chekupedzisira, kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezvazvo, unogona kutarisa noti pane iyo Linux Mint blog.
Iyo yekubatanidza ndeiyi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Noticias » Linux Mint ichavhara yakavanzika snapd kuisirwa
Devuan 3.0 Beowulf inosvika neDebian 10.4 base, Kernel 4.19 uye nezvimwe
Ubongo: Yakavhurika Muchinjikwa -Puratifomu App Yekugadzira